विघठित बैकल्पिक शक्ति पुन: एकीकरण तर्फ, यस्तो छ तयारी | - News Portal in Nepali
स्टिम न्युज वि.सं १७ भाद्र २०७७, बुधबार ११:०८
काठमाडौं: बैकल्पिक शक्तिको नामले उदाएको विवेकशील नेपाली दल र विवेकशील साझा पार्टी बिच पुन्: एकिकरण गर्ने सम्भावना देखिएको छ। विवेकशील र साझा बिच पुन्: एकिकरणका लागी बिभिन्न चरणमा छलफल समेत भैरहेको उच्च श्रोत बाट स्टिम न्युजलाई जानकारी मिलेको छ ।
२०७४ साल साउन ११ गते तत्कालिन उज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दल र रबिन्द्र मिश्रको साझा पार्टी बिच एकिकरण भइ विवेकशील साझा पार्टी गठन भएको थियो। त्यसको १७ महिनामा उज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली बिभाजित भइ विवेकशील नेपाली दल गठन गरेका थिए।
साझा पार्टिका प्रवक्ता समेत रहेका डा. सुर्यराज आचार्य र अर्का केन्द्रीय सदस्य मुमाराम खनालले साझा पार्टी छोडे सङ्गै दुई पार्टी बिच एकिकरणको बहस तल्लो तह सम्म चलेको थियो। हाल विवेकशील र साझा बिच पार्टी नेतृत्व र सांगठनिक प्रक्रियाललाई लिएर छलफल भैरहेको पाईएको छ।
विवेकशील नेपाली दलका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका छिरिंग तामांगद्वारा अनलाइन खबरमा प्रकासित विवेकशीलको उल्टो बाटो, अत्तालिएको साझा”लेखले समेत यो कुरालाई पुष्टि गर्ने कोशिस गरेको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार विवेकशीलका तर्फबाट एकिकरणको लागी निर्देश सिलवालको संयोजकत्वमा सम्बाद समिती समेत बनेको छ।
एकिकरण पश्चात दलको नेतृत्वमा विवेकशील नेपाली दलका दुईजनाको नाम अग्रपंक्तिमा छ। विवेकशील नेपाली दलबाट तत्कालिन स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका उमेद्वार रहेकी रन्जु दर्शना र अर्का प्रदेश ३ का समानुपातिक संसद रमेश पौडेल।
रमेश पौडेल र बिराजभक्त श्रेष्ठ तत्कालिन विवेकशील साझाबाट समानुपातिक संसद बनेका थिए। पार्टी बिभाजन संगै यी दुई संसद विवेकशील नेपाली तिर गएपछि साझा पार्टीले दुबैजनाको संसद पद खारेज गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा निबेदन दिएका थिए। त्यस लगतै दुबै संसदले त्यसबिरुद सर्बोच्चमा रिट दायरा गरेका थिए। जुन मुद्दा अहिले पनि सर्बोच्चमा बिचाराधिन छ।
किन यी नाम अगाडी आए?
पार्टी बिभाजन पश्चात विवेकशीलले जनकपुरमा गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट मिलन पाण्डे पार्टीको अध्यक्षमा चयन भएका थिए। तर उनलाई साझा पार्टीका नेत्रित्व एवंम् सदस्यहरुले अध्यक्ष मान्न नसक्ने भएपछी बिकल्पमा पौडेलको नाम आएको हो। उता राष्ट्रिय सम्मेलनमा बहुमतले निर्वाचित भनिएपनि चुनावताका फर्जी भोट हालेर जितेको भनेर पाण्डे लगाएत केहि केन्द्रीय सदस्यहरुमाथी आरोप लागेको छ। त्यस बिषयमा पार्टी भित्रै छानबिन भैरहेको बताइएको छ ।
साझा पार्टीका अध्यक्ष रबिन्द्र मिश्रपनि बिबादित बनेका छन्। उनलाई आफ्नै पार्टीमा समेत एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै बिभिन्न आरोप लागीरहेको छ। यता विवेकशील तर्फबाट उनलाई अध्यक्ष मान्न तयार नदेखीएपछि पनि जित-जितको वातावरण बनाउन समेत अन्य दुई नाम अग्रपंतीमा देखीएको बुझिएको छ।
विवेकशील तर्फकै रन्जु दर्शनाको सम्भावना पनि उतिकै दमदार रहेको बुझिएको छ। काठमाडौं महानगरको मेयर पद चुनावमा उनले पाएको जनमतले समेत उनलाई ठुलो सहयोग गर्ने देखिन्छ। युवा महिला नेत्रीलाई बैकल्पिक शक्तिको अध्यक्ष बनाएर जादा आउदो चुनावमा पार्टीलाई ठुलो सहयोग पुग्ने मनोविज्ञानले काम गर्ने ठहर गरेको पाइएको छ।
रबिन्द्र मिश्र अध्यक्ष नरहने
सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको दुबै पार्टीका अध्यक्ष एकता पछिको अध्यक्षममा नदेखिने सम्भावना रहेको पाइएको छ। बिबिसीबाट पत्रकारीता छोडेर राजनितीमा होमिएका मिश्र समेत अध्यक्ष नरहने बुझिएको छ। तत्कालिन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिमा अध्यक्ष नपाएको, तथा तत्कालिन राप्रपामा महामन्त्री नपाएको, र विवेकशीलमै पनि अध्यक्ष नदिने भएपछी साझा पार्टी खोलेको आरोप उनलाई बिनिन्न चरणमा लागेको थियो। अहिले एकताका लागी पद छोडेर पछाडी बस्दा आम जनतामा सकारात्मक संदेश जाने र आउदो निर्वाचनमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने आकलन गरेको पाइन्छ। बिबिसी छोडेर आएका उनले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेमा पदको लागी मरिहत्ते नगर्ने त्यागी नेताको रुपमा छबी बनाई आउदो चुनावमा राम्रो मत ल्याउन सकिने बिश्वास पाइन्छ। बिभाजन भएपश्चात तत्कालिन अध्यक्ष उज्वल थापाले अध्यक्ष पदमा उमेद्वारी नदिने घोषणा गरेका थिए। त्यसलाई लिएर मिडियामा राम्रो बहस भएको थियो। मिश्रले समेत त्यसलाई आधार मानेको बुझिएको छ ।
अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह तर्फ बाट भएको अन्तिम घडीको दाउपेच बुझ्न नसक्दा चुनाव हार्न पुगेको हुनाले यो पटक युवालाइ अगाडी बढाएर त्याग गरेको साथै दाउपेच लाइ कसरि निस्तेज गर्ने भन्ने बुझेको अवस्था भएकाले काठमाडौँ क्षेत्र नं १ बाटै उठेर जित्ने अत्यधिक सम्भावना रहेको उनको बुझाई छ।
यता राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कांग्रेस निकट राधेश्याम अधिकारिलाइ समर्थन गरेकोले उनलाई कांग्रेसबाट समेत ठुलो सहयोग मिल्ने बुझिएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीले अधिकारिलाइ समर्थन नगरे पार्टीबाट राजिनिमा दिने समेत बताएका थिए। विवेकशील तर्फका केन्द्रिय सदस्यहरुले उक्त निर्णयको बिरोध गर्न नसकेका कारण पनि तत्कालिन पार्टी फुटको बिउ त्यहींबाट रोपिएको थियो भन्ने बुझ्नमा आएको छ।
रबिन्द्र मिश्रको राधेश्याम अधिकारि प्रतिको त्यो अडान तथा निकट सम्बन्धकै कारण कांग्रेसका नेताहरुले काठमाडौँको मेयर पद विवेकशील साझा भएमा त्यो पार्टीकी नेत्री रन्जु दर्शनालाई छोडिदिने बिश्वास लिएका छन्।
जसरि पनि कम्युनिष्टलाइ हराउनु पर्ने भएकोले पालो को पैंचो गर्न कांग्रेस तयार रहेको हुदा मिलेर अगाडी जानसक्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ।
सकिन लागेकै होत साझा?
मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी अहिले सकिन लागेको होकी भन्ने आम चासो पनि छ। साझा पार्टीबाट केन्द्रित सदस्य डा. सूर्यराज आचार्य र मुमाराम खनालले पार्टी परित्याग गरे त्यसको केहि समयपछी पुर्व सचिव समेत रहेका नारायण कोइरालाले समेत पार्टी परित्याग गरेका थिए। हालसालै सिद्धि अर्यालले पनि साझा छोडेका छन्।
केन्दीय सदस्यहरुले लगातार पार्टी परित्याग गरेपछि साझा पार्टी सकिन लागेको आम धारणा छ। केन्द्रीय सदस्य लगाएतका नेता कार्य-कर्ताले समेत पार्टी छोडेको बुझिएको छ ।
पहिला रबिन्द्र मिश्रका स्वकीय सचिव भएर काम गरेका राज हुमागाईंले साझा अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेको आफ्नो ट्विट माफर्त व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। उनका ट्विट अनुसार साझाले उनलाई स्वच्छ वैकल्पिक राजनीति भनी धोकामा राखेको र अहिले यथार्थ बुझेको भन्दै ट्विट गरेका छन्।
दुई नेताले पार्टी परित्याग गरेपछि अध्यक्ष मिश्रबाट आएको बिज्ञप्तिले पनि पार्टी धारासायी भएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
साझा पार्टीका सदस्य साथीहरूलाई प्रेषित सन्देश:
यो हप्ता पार्टीमा विकसित घटनाक्रमबाट हामीजस्तै तपाईं पनि चिन्तित…
Posted by Rabindra Mishra on Friday, July 17, 2020
यता विवेकशीलको नेतृत्व परिबर्तन भएमा साझा पुन: एकीकरण गर्न तयार रहेको बुझिएको छ । साझाले विवेकशीलको यहि नेतृत्वको बारेमा बिगतमा बिभिन्न मिडिया बाजी गरेको हुनाले पनि यहि नेतृत्व संग काम नगर्ने देखिएको छ ।
एकिकरण हुनेनै होत ?
प्राप्त जानकारी अनुसार सांगठनिक छलफल मिले एकीकरण पक्काहुने देखिएको छ। दुबै पार्टी बिभाजनको अवस्था र घटनाहरुको मुल्यांकनले पनि पार्टी एकिकरण हुने देखिएको छ। यता विवेकशील नेपालीले पनि साझाको बिकराल अवस्था भएको र त्यस पार्टीलाई बचाउन विवेकशीलबाट मात्र सम्भव छ भन्ने बुझाई छ। त्यसैको फाइदा उठाउदै पार्टी दर्ता गर्ने, एकीकरण हुदा पुर्व विवेकशीलको सम्पति जुन अहिले रबिन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा संग छ त्यो फिर्ता गराउने, र सदस्य माझ गएर दुई तिहाई पुर्याई एकिकरण गर्ने भन्ने योजना रहेको बुझिएको छ।
अहिलेको केहि नेतृत्वहरु तत्कालिन नेतृत्वले रोडमा छाडेको पार्टीलाई दर्ता गरि सम्पति फिर्ता ल्याएर एकीकरण गरेमा उनीहरुको राजनीतिक करियर सेट हुनेमा ढुक्क देखिएका छन्। रबिन्द्र मिश्र वा उज्वल थापाले छोडेको पार्टीलाई आफुहरुले उठाएर यहाँ सम्म ल्याएको भन्ने देखाऊन सके आफ्नो राजनीतिक करियर बन्नेमा उनीहरुको बिश्वास रहेको बुझिएको छ।
भुकम्पमा पैसा हिनामिना गरेको भनेर विभिन्न पत्रिकाले विवेकशीललाई आरोप लगाई रहने, अनि भूकम्पमा उठेर बाँकी रहेको ५० लाख बढी पैसा अहिले पनि साझा पार्टीकै खातामा रहेकाले, त्यो पैसा चलाउन पनि एकीकरण गर्नु पर्ने अर्को कारण हुन सक्छ।
विवेकशीलले भर्खर राजनीतिक दस्तावेज पारित गरेको छ । त्यहि दस्ताबेजका आधारमा साझाले महाधिवेसन गरेर आए ५०-५० प्रतिशत केन्दीय सदस्य गरेर जान सक्ने देखिएको छ। यदि त्यसमा सहमती भएमा साझाको पक्षमा आर्थिक, संगठन र संचार बिभाग दिन विवेकशील तयार रहेको बुझिएको छ। त्यस्तै महत्वपुर्ण प्रदेशको नेतृत्वहरु कसले गर्ने प्रश्न चाँही पेचिलो भएको छ। विवेकशील तर्फ कुनै सम्मेलन भैनसकेको तर साझा तर्फ सबै कमिटि रहेको स्थितिमा, कुन पक्षले बाजि मार्ला, त्यो त समय संगै छर्लंग हुँदै जाला। तत्कालिन समयमा विवेकशील साझाको प्रदेश ३ को नेतृत्व समीक्षा वास्कोटालाइ दिंदा, फुटको विउ रोपिएको वानेश्वोर घटना भएको थियो।
यदि साझाले महाधिवेसन नगरी एकीकरण हुने भएमा भने विवेकशील कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको बुझिएको छ। यसो हुँदा साझाले ३० – ४०% मात्रै केन्द्रिय सदस्य दिईने अडान राखेको छ। आर्थिक पक्ष साझको राम्रो भएकोले आर्थिक तथा नीति बिभाग साझालाई दिएर अरु विवेकशीलले आफैँ राख्ने बुझिएको छ। प्रवासको पनि हालको विवेकशील कमिटीकै मातहतमा साझाका सद्भाव समुहका सदस्यहरुलाई एकीकृत पार्टीमा गोलबद्धगरि अगाडी बढाउने बुझिएको छ। त्यस संगै हाल साझामा रहेको युवा तथा महिला लगायत भात्रि संगठन खारेज गराउने पनि बुझिएको छ।
यता विवेकशील तर्फ अहिले साझा पार्टी कमजोर भएको भन्दै, बाहिरी आवरणमा साझा पार्टीका सदस्यले पहल गरेको देखिएता पनि, भित्र विवेकशीलले नै बढ्ता जोड गरेकाले, विवेकशीलको आफ्नो ८-९ महिना देखिको रणनितीले काम गरेको भन्दै एक प्रकारको खुसीयाली छाएको बुझिएको छ।